Pa-Auk Tawya Meditation Centre
Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Pyin Oo Lwin)
Tat-Oo Dhamma Yeiktha (Extended)
Meditator / Visitor Registration
Myanmar English 正體 Vietnam
Register (Step 1)
Login (Step 2)
I had registered.	 Application တင်နည်းလမ်းညွှန် Guide for application procedure
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 1-Jan2-Feb3-Mar4-Apr5-May6-Jun7-Jul8-Aug9-Sep10-Oct11-Nov12-Dec 1921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Re-entry Date of birth
FemaleMale Verification Code
FemaleMale Entry Verification Code
PC Mode | Mobile Mode
Link To : Pa-Auk Tawya University (Manmyodaw)
အသိပေးကြေငြာချက် Temporary Suspension of Retreat
ရက်စွဲ၊ ၁၃၈၁ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက် (5 March 2020)
(၁)	ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်သာ (တပ်ဦးဓမ္မရိပ်သာ၊ တိုးချဲ့)၊ ကျင်ဂနိုင်၊
(၂)	ဖားအောက်တောရ တပ်ဦးဓမ္မရိပ်သာ၊ ကျောက်ဖျာဒိုး၊
(၃)	မန်းမြို့တော် ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ကျောက်ဖျာဒိုး ဤကျောင်းတိုက်များတွင်
ယောဂီများလက်ခံခြင်းကို COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကင်း‌ဝေးပပျောက်ချိန်ထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် သင်္ကြန်တရားစခန်း ကျင်းပခြင်း မပြုတော့ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူလမ်း‌ကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာသို့ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်လက် ပြန့်ပွားနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါလက္ခဏာပြသည်အထိ ရောဂါပျိုးရက်သည် ရက်အနည်းငယ်မှ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ် သုံးပတ်ထိ ကြာနိုင်ပြီး ကူးစက်ခံရမှန်းမသိမီ အခြားသူများသို့ ဆက်လက် ကူးစက်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လူစုလူဝေးများကို ရှောင်ကြဥ်ရန် စသော သတိပေးထုတ်ပြန်ထားချက်များကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကယ်၍ ဤဌာန၌ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလာပါက ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဗိုင်းရပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရပါက လူငယ် လူလတ်များအဖို့ ပြန်လည် ကောင်းမွန်နိုင်သော်လည်း အားနည်းသော လူကြီးများအတွက်မူ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည်ဆိုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သင်္ကြန်တရားစခန်းကျင်းပခဲ့သော် လူစုလူ‌ဝေးဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပါက ကုသိုလ်တရားများမပွားများနိုင်ဘဲ အားလုံး ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲကြရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း ထိုထိုသော အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကာ တာ၀န်ရှိသူများ ညှိနှိုင်းစည်းဝေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်၍ ယောဂီများလက်ခံခြင်းကို ဤကူးစက်ရောဂါ ကင်း‌ဝေးပပျောက်ချိန်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားပါကြောင်းနှင့် လာမည့် သင်္ကြန်တရားစခန်းကို ကျင်းပမည် မဟုတ်တော့ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
ယောဂီသူတော်စင် ပရိသတ်အပေါင်းတို့၏ နားလည်လက်ခံပေးမှုကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျောင်းတွင်းကျောင်းပ ပရိသတ်အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကင်း‌ဝေးစွာဖြင့် ကုသိုလ်တရားများ ဆည်းပူးပွားများနိုင်ကြပါစေ‌ကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။
ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်သာ (တပ်ဦးဓမ္မရိပ်သာ၊ တိုးချဲ့)၊ ကျင်ဂနိုင်,
ဖားအောက်တောရ တပ်ဦးဓမ္မရိပ်သာ၊ ကျောက်ဖျာဒိုး,
မန်းမြို့တော် ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ကျောက်ဖျာဒိုး,
Temporary Suspension of Retreat
Application for the retreat has been temporary suspended for all.
With regards to the Coronavirus outbreak in China, the Most Venerable Pa-Auk Tawya Sayadawgyi and the Saṅgha have been sending mettā and sharing merits to all and wish for the control of the disease outbreak. Sayadawgyi hopes that everyone can take care of themselves and be free from any danger.
While Sayadawgyi is accepting meditators from all over the world, reliable screening has not been available, and many Myanmar hospitals are still insufficient in many aspects and need to be upgraded. At present, the Myanmar government is strict with foreigners who show signs of illness. Affected patients can only be isolated or requested to send home.
As such, for the common safety of all, application foraretreat has been temporarily suspended for all.
May we all send Mettā and share merits to all beings
May they all be free from physical and mental suffering.
Pa auk Tawya Pyin Oo Lwin
Application တငျနညျးလမျးညှနျ Guide for application procedure and အခကျအခဲ ဖွရှေငျးနညျး Troubleshooting
**** Application တငျနညျးလမျးညှနျ Guide for application procedure ****
အောကျပါ Linkမှာ Application တငျပါ။
Internet ဖှငျ့ထားပွီး အထကျပါ link ကို နှိပျ၍ websiteသို့ ဝငျပါ။ Website သို့ ဝငျပွီးဖွဈပါက Menu ဘားမှာ "Application" ကို ဆကျနှိပျပါ။ Apply hereကို နှိပျပါ။ Step 1 ကို ဖွညျ့ပွီး Submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။
ပွီးလြှငျ အီးမေးရောကျလာပါလိမျ့မညျ။ (မိမိအီးမေးကို စဈပါ။)
အီးမေးနှငျ့ ပို့လာသော password နံပါတျကို ကူးယူလာပွီး (သို့) မှတျသားပွီး websiteသို့ ပွနျသှားကာ Step2ကို နှိပျပါ။
မိမိ၏ အီးမေးဖွညျ့ပါ။ ကူးလာတဲ့ password ကို ထညျ့ပါ။ submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။ လြှောကျလှာဖွညျ့ရနျ page ပျေါလာပါမယျ။
လြှောကျလှာဖွညျ့ပွီး submit(တငျပွပါ)ကို နှိပျပါ။
လြှောကျလှာရရှိကွောငျးအီးမေးတဈစောငျပွနျရောကျလာပါမညျ။ (လာခှငျ့ပွုခွငျး မဟုတျသေးပါ။)
လာခှငျ့ရပါက လာခှငျ့ရကွောငျး Approval အီးမေးတဈစောငျ ထပျပို့လာပါလိမျ့မညျ။
Approval အီးမေး ရောကျမလာသေးပါက လာလို့မရသေးပါ။ ဆကျလကျစောငျ့ဆိုငျးရနျဖွဈပါသညျ။
အီးမေးရှိသူတဈဦးတညျးက အခွားသူမြားအတှကျလညျး တငျပေးနိုငျပါသညျ။ ထိုသို့ တငျပေးလိုပါက Step2၀ငျပွီးလြှငျ အထကျဘယျဘကျရှိ Menuကိုနှိပျပါ။ "Apply for my Friends" ကို နှိပျပါ။"
**** အခကျအခဲ ဖွရှေငျးနညျး Troubleshooting ****
Step 1 တငျပွီးနောကျ အီးမေးဖွငျ့ လှိူ့ဝှကျနံပါတျ ရောကျမလာသျော သို့မဟုတျ အခွားအခကျအခဲမြားရှိခဲ့သျော အောကျပါအခကျြမြားအနကျ တဈခုခုကို ဆောငျရှကျကွညျ့ပါ။ If you do not receiveapassword by email or if you have some difficulties, please do one of the followings.
1) မိမိရိုကျထညျ့သော အီးမေးမှနျမမှနျ ပွနျစဈဆေးပါ။ Check whether the email address you typed is correct or not.
2) အီးမေးသညျ Spam Folderထဲ သို့မဟုတျ Update folderထဲ သို့မဟုတျ Promotion folder ထဲ သို့မဟုတျ Trash Folder ထဲရောကျနတေတျပါသညျ။ (ထို Folder များကိုလည်း Email Settings>Manage labels>)တြင္ "sync messages" လုပ်ထားရပါမည်။
Check in the spam folder or Update folder or Promotion folder or Trash Folder (it may be in Spam/Update/Promotion/Trash folder) (Those folders must be set "sync messages" in Email Settings>Manage labels>.)
3) အခွား အငျတာနကျ Browser တဈခုခု ပွောငျးသုံးကွညျ့ပါ။ Try again fromadifferent browser.
4) အခွားHandphone/computer ပွောငျးသုံးကွညျ့ပါ။ Try from other devices.
5) အခွားအီးမေးဖွငျ့ ပွနျတငျကွညျ့ပါ။ Try withadifferent email address.